August 5, 2020 Dai 20, 2021 0
Remote Procedure Call (RPC) iri tekinoroji iripo kubva pakatanga kubuda makomputa uye inoshandisa nzira yekutaurirana yekuita. Chinangwa chayo chikuru ndechekugonesa mutengi uye sevha yekutaurirana nemumwe pamusoro peti network. Vamwe vashandisi mushure mekupedza kusimudzira kune shanduro nyowani ye Windows 10 unogona kuona kuti kuita chero iri kure kuraira kunokundikana nemharidzo yekukanganisa Iyo RPC server haina kuwanikwa - isati yasvika yekukwidziridza iyi iri kure mairairo ibudirire. Mune ino post, tinoratidza izvo zvinokonzeresa uye tozopa mhinduro dzinogoneka dzaungaedza kubatsira kugadzirisa nyaya iyi.
Mharidzo yekukanganisa Iyo RPC Server haina kuwanikwa inogona kukonzerwa nechero ipi inotevera:
Imwe kana akawanda masevhisi anodiwa neRPC akaremara.
Rubatsiro rwuri kure rwakaremara neFirewall.
IPV6 kana File Printer Kugovera yakaremara.
Iyo IP kero iri kuputsa iyo RPC server.
RPC masevha akaremara kuburikidza neRegistry.
Iyo RPC server haina kuwanikwa
Kana iwe uri kutarisana nekanganiso iyi, unogona kuedza mhinduro dzakakurudzirwa pazasi.
Tarisa RPC sevhisi pakombuta yako
Gonesa Remote Desktop / Kubatsira muFirewall
Shandura Startup Sarudzo kubva paSarudzo yekutanga kuenda kuKuda kutanga
Gonesa IPV6 uye Faira & Printer Kugovana yenetiweki yakabatana
Flush DNS & Kuvandudza
Kumanikidza RPC masevhisi kuti utange kushandisa Registry Mharidzo.
Ikozvino, ngatimboongororai matanho ane ruzivo ezve mhinduro idzi.
1] Tarisa seRPC service pakombuta yako
Iyi mhinduro inoreva kuti unopesana nezvimwe zvinoshandiswa zvechitatu-bato kana kushandura masisitimu system zvinogona kumanikidza iyo RPC sevhisi kuti iende kubva kune yakasarudzika (otomatiki) kukosha kubhuku. Izvi zvinoreva kuti RPC inogona kusatanga otomatiki painenge ichidikanwa.
Kuti utarise RPC sevhisi pakombuta yako, ita zvinotevera:
dzvanya Windows + R, mhando services.msc mune dialog box uye rova ​​Enter.
Kamwe pawindows re Services, tsvaga maitiro anotevera:
RPC Endpoint Mapper kana Remote Procedure Call (RPC) Locator
Dzvanya-kurudyi pane rimwe nerimwe sevhisi uye sarudza Properties.
Kamwe muzvivakwa, ita shuwa kuti sevhisi iripo Yakatanga uye Nhamba yekutanga yakaiswa se otomatiki.
Sevha shanduko uye ubude.
Restart komputa yako uye ona kana nyaya yacho yakagadziriswa.
2] Inogonesa Remote Desktop / Kubatsira muFirewall
Kubvumira Remote Rubatsiro mune firewall pakombuta yako, ita zvinotevera:
dzvanya Windows key + R, mhando masimba mune dialog box uye rova ​​Enter.
Kamwe panodzora pani pops kumusoro, mhanya firewall mubhari yekutsvaga kumusoro-kurudyi kwehwindo uye warova Enter.
Kubva pane zvawanikwa, tinya Rega app kuburikidza Windows firewall inova subcategory pasi pepasi Windows firewall.
Click on Shandura zvirongwa uye ita shuwa kuti zvinopinda zvinomanikidza RPC zvinoongororwa senge Rubatsiro ruri kure.
3] Shandura Startup Sarudzo kubva paSarudzo yekutanga kusvika kuKuda kutanga
Yekutanga yekusarudza inzira yekubika iyo inobvumira komputa yako kuti ivhure nenhamba shoma yezvinhu zvakaiswa. Izvi zvinowanzoitwa kana kugadzirisa matambudziko necomputer yako zvingangosanganisira zvimwe zvinoshandiswa zvechitatu. Nekudaro, pese paunobhowa uchishandisa sutu yekutanga, komputa yako haizotakure zvinhu zvese zveRPC pakombuta yako. Mune ino kesi, isu tichasarudza yakajairika yekutanga uye toona kana izvi zvinogadzirisa nyaya. Heano maitiro:
dzvanya Windows key + R, mhando msconfig mune dialog box uye rova ​​Enter.
Kamwe mune yekutanga gadziriro, sarudza iyo tab General uye sarudza sarudzo Zvakajairika kutanga.
Click Shandisa > OK kuchengetedza shanduko uye kubuda.
Uchatungamirwa kutangazve. Kutanga patsva nekukurumidza uchishandisa iyo popped up hwindo uye tarisa kana mharidzo yekukanganisa yagadziriswa.
4] Gonesa IPV6 uye Faira & Printer Kugovana yenetiweki yakabatana
Mune zvimwe zviitiko, unogona kusangana ne Kukanganisa 1722: RPC server haina kuwanikwa kuburitsa mune zviitiko apo paine network yekubatanidza kukanganiswa kunokonzerwa neumwe kana akawanda marongero. Mune ino kesi, kugonesa IPV6 uye Faira & Printer Kugovana yenetiweki yakabatana inogona kugadzirisa nyaya. Ita zvinotevera:
dzvanya Windows kiyi + R uye wozonyora ncpa.cpl mu Mhanya dialog bhokisi uye rova ​​Enter kuvhura iwo Network Connections hwindo.
Mukati meWindaneti Network, dzvanya-pane-network kune iyo yaunobatana nayo nekurova Properties.
Paunenge iwe uchinge wasvika kune Zvivakwa zvekubatana kwako netiweki, enda kune Networking tab uye wobva pasi pasi kuburikidza nerondedzero yezvinhu.
Tsvaga Faira uye Printer Kugovera kweMicrosoft Networks uye Internet Protocol Version 6 (TCP / IPv6) uye ita shuwa kuti zvese zvakabatana mabhokisi zvinotariswa.
Click Ok kuchengetedza shanduko.
Restart komputa yako uye ona kana nyaya yacho yakagadziriswa panguva inotevera yekutanga.
[Mufananidzo uri papeji 5] Flush DNS & Renew
Mhinduro iyi inoda kuti iwe uone kuti masevhisi akabatanidzwa muRPC yekubatana ari kushanda (sezvakatsanangurwa mumhinduro 1 kumusoro) usati waenderera mberi kuburitsa iyo DNS uye kuvandudza kubatanidza.
Kana iwe uine chokwadi chekuti anodiwa masevhisi ari kushanda, tevera mirairo pazasi kuenda svina iyo DNS uye patsva kubatana.
Kutanga kuraira kufambisa mune yakasimudzwa mode.
Mukati meiyo yakasimudza Command inomhanya, nyora mutemo unotevera uye rova ​​Enter kuti upfutidze iyo yazvino IP Gadziriro:
Kana iwo murairo wabudirira kunyoreswa, nyora unotevera kuraira uye rova ​​Enter kuti uvandudze iyo IP Kugadziridza:
ipconfig / reva
Kamwe iyo IP yagadziriswa, vhara iyo yakakwidziridzwa Command Prompt uye ita mirairo iri kure uye uone kana nyaya yacho yagadziriswa.
6] Kumanikidza RPC masevhisi kuti utange kushandisa Registry Mharidzo
Kuti ushandise Registry Edhiyo kumanikidza RPC masevhisi kutanga, ita zvinotevera:
Kutanga Registry Mhariri.
Mukati meRegistry Edhira, shandisa pane kuruboshwe kuruboshwe kuenda kunotevera nzvimbo:
With the RpcSs kiyi yakasarudzwa, famba pasi pasi kurudyi-pani uye piya-kabiri pa kutanga kugadzirisa zvaro.
Mubhokisi rezvivakwa, seta hwaro to hexadecimal uye Kuyera data to 2.
Click OK kugonesa Bvisa Procedure Call (RPC).
Tevere, shandisa pane kuruboshwe-kuruboshwe kana kuvharira bara kumusoro, (isa nzira yekunyoresa uye warova Enter) kuti uende kunzvimbo iyi:
Paunenge iwe wasvika kunzvimbo iyoyo, tinya kaviri kutanga kubva kurudyi-ruoko.
Wobva waisa hwaro to hexadecimal uye kukosha data ku 2.
Click OK kuitira kuti DCOM Server process Launcher.
Pekupedzisira, enda kunzvimbo inotevera uchishandisa bara rekufamba kumusoro kana nekushandisa iyo kuruboshwe-kurudyi pane:
Enda pamusoro kurudyi kurudyi pane uye wobva wadzvanya-maviri Kutanga.
Wobva waisa hwaro to hexadecimal uye Value Data to 2.
Vhara iyo Registry Edhira, tanga komputa yako uone kana iyo 'Iyo RPC server haina kuwanikwa ' nyaya yagadziriswa kune inotevera system yekutanga.